Matte Ibhafu yegumbi lokuhlambela ibanzi
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukusasazeka kweeMpompo zegumbi lokuhlambela / WOWOW Matte Black-Handle Mbini-esasazekayo Igumbi lokuhlambela
WOWOW Matte mnyama Mnyama-uphatha indawo yokuBanzi yegumbi lokuhlambela
Imingxunya emi-3 iMoucet yeBathroom eNabileyo: umgama onokuhlengahlengiswa phakathi kwe-6'' – 14''; Ubungakanani bomngxuma: 32 – 38 mm/ 1.26 – 1.5'' (Plz jonga isayizi yetshonki yakho phambi kokuodola)
ITekhnoloji yokuQhagamshela okuHlanganisiweyo: kulula ukuyifaka ngokwakho ngaphandle kweplumber, yiza ne-pop up ye-drain kopano. KHUSELA UKUVUNYWA KOKUFAKWA KWESIBHENGO NGEXESHA LOKUFAKA
IFaucethi yokuhlambela yeMatte emnyama ene-matte e-2: umphezulu owahlukileyo omatte omnyama, wakudala kwaye ulula, ukuxhathisa ukubola kunye nokungcoliswa ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla, ilingana nendlu yokurenta, i-condo, indawo yokuhlala, igumbi lokuhlambela, ukusetyenziswa kwezorhwebo, ihotele.
IiFaucets ze-Basin-free: ukutywinwa okuphezulu kwekhatriji ye-ceramic ye-NSF kunye ne-aerator ye-ABS yokugcina amanzi iqinisekisa ukuba akukho kuvuza kunye nelothe, okwangoku ibonelela ngobunono, ukuhamba kwamanzi okuzinzileyo okulawulwa ziziphatho ezibini ngomzamo omncinci.
Inkonzo yabaThengi: Iwaranti yeminyaka emi-3 kunye nenkxaso yabathengi iyanikezelwa. Ihlawulelwa yimbuyekezo yeentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Iimbobo ezi-3 zeNtaba ebanzi yokuhlamba yangasese 2321300B-AMUS: umgama onokutshintshwa phakathi kwe-6 `` -14 ''; Ubungakanani beHole: 32 - 38 mm / 1.26 - 1.5 ''
I-2-Handle Bath Bath faucet: ikumgangatho ophakathi omnyama we-matte, eklasikhi kunye nolula, ukuxhathisa ukuvela kunye nokuthambisa ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla, kufaneleka indlu eqeshisayo, i-condo, indlu, indawo yokuhlala, ukusetyenziswa kwezorhwebo, ihotele
Amabala angenazintsu aKhokelayo angenasiphatho: Isitywina esiphezulu se-NSF ikhareji yokugcina amanzi kunye ne-aerator yokonga amanzi iqinisekisa ukuvuza nokukhokela, okwangoku zibonelele ngobumnene, ukuhamba kwamanzi okuzinzileyo kulawulwa zizibambo ezibini ngomzamo omncinci.
UMVUZO WOBOMI NGOKUGQIBELA NGEXESHA LOKUXELWA: Kugqitywe iintsuku ezingama-90 zokubuya simahla kunye newaranti yobomi! SICELA UQHAGAMSHELWANO EMAIL❤service@wowowfaucet.com
I-SKU: 2321300B-AMUS iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukusasazeka kweeMpompo zegumbi lokuhlambela tags: 8 intshi, Mnyama, Hlamba
12.1 x 8.6 x 3 intshi